Radio Dhangadhi 90.5 MHz | विश्व जोड्ने चिनियाँ योजनामा रुसको साथ
Thursday, February 20 2020, 18:18 | बिहिबार ०८, फागुन २०७६ १८:१८
विश्व जोड्ने चिनियाँ योजनामा रुसको साथ
आइतबार, १४ माघ २०७४| Radio Dhangadhi
चीनले आफ्नो महत्वाकांक्षी परियोजना 'पोलर सिल्क रोड' को घोषणा गरेको छ। गत शुक्रबार घोषणा गरिएको यो परियोजनाको उद्देश्य पृथ्वीको उत्तरी ध्रुवको आसपास समुन्द्री मार्ग निर्माण गरी व्यवसाय वृद्धि गर्नु हो।
नयाँ परियोजना चीनको 'वन बेल्ट वान रोड (ओबीओआर) ' कै एक हिस्सा हो। सन् २०१३ देखि चर्चा हुँदै आएको यो परियोजनाको औपचारिक घोषणापछि यसको सम्भावित प्रभावका विषयमा चर्चा सुरु भएको छ। चीनले यदि यो परियोजना कार्यान्वयन गर्‍यो भने ऊ उत्तर अमेरिका, पूर्वी एसिया तथा पश्चिम युरोपका तीन ठूला आर्थिक ध्रुवलाई जोड्न सफल हुनेछ।
जलवायु परिवर्तनका कारण चीनको यो योजनालाई बल मिलेको चर्चा छ। प्रतिकूलतालाई पनि आफ्नो हितमा उपयोग गर्न सिपालु चीन के चाहन्छ भने जलवायु परिवर्तनका कारण अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई अझ सुगम बनाउन सकियोस्।
यो मार्ग निर्माणबाट मुख्य व्यापारिक साझेदारहरूसँग हुने व्यापारमा लाग्ने समय र लागत बचत हुने चीनको विश्वास छ। उत्तरी ध्रुवको दुर्गम 'आर्कटिक महासागर' मा समुन्द्रीमार्ग निर्माणको उद्देश्य सार्वजनिक गर्ने चीन पहिलो एसियाली मुलुक हो। भलै यो दुर्गम महासागर हो । तर, यो प्राकृतिक स्रोतसाधनले भरिपूर्ण छ। यो नयाँ मार्गको विषयलाई लिएर चीन किन यति धेरै उत्साही छ ? यसबाट उसलाई के फाइदा छ?
चिनियाँ सरकारको दस्तावेजअनुसार उसले आफ्ना कम्पनीलाई आधारभूत ढाँचा विकास गर्न प्रोत्साहित गर्ने छ। सँगै उनीहरूलाई व्यवसायिक आवागमनका लागि प्रोत्साहित गरिनेछ। र, उत्तरी ध्रुवसम्म पुग्ने समुन्द्रीमार्गलाई निकट भविष्यमा सक्रिय बनाइने छ।
हालैका वर्षहरूमा चीन नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय समुन्द्री मार्ग तथा बन्दरगाह निर्माणमा निकै सक्रिय भएको छ। व्यापारका लागि पुराना र धेरै समय लाग्ने मार्गमा निर्भर नभइ छोटो समय र दूरीका मार्ग उपयोग गर्न सकियोस् भन्ने चीनको चाहना देखिन्छ। ऊ परम्परागत मार्ग, जसलाई पनामा रुट पनि भनिन्छ, यसबाट आफ्नो निर्भरता हटाउन चाहन्छ।
एक अनुमानअनुसार यदि चीन यो मार्ग निर्माणमा सफल भएमा अहिले नेदरल्यान्डको रोट्रेडमबाट पनामा च्यानल हुँदै चीन आउन जति समय लाग्छ, नयाँ मार्गबाट आउँदा २० देखि ४८ दिन कम लाग्छ।
पोलर सिल्क रुटसँग सम्बन्धित सबै मुलुकले आफ्नो योजनालाई साथ दिनेमा चीन विश्वस्त रहेको त्यहाँको सूचना परिषदद्वारा प्रकाशित दस्तावेजमा उल्लेख छ। यो दस्तावेजका अनुसार सबै मुलुकलाई यो मार्ग प्रयोग गर्ने अधिकार रहनेछ।
चीनको भनाइ छ कि पर्यावरण संरक्षणमा पनि यो मार्गबाट रणनीतिक मद्दत मिल्नेछ। वास्तविकता के हो भने यो महासागरमा चीनको समुन्द्री तट छैन। यहाँ रुस, अमेरिका, क्यानडा, आइसल्यान्ड, स्वीडेन, नर्वे, फिनल्यान्ड र डेनमार्कजस्ता मुलुक उपस्थिति छ।
यी देशहरूबीच आआफ्ना हितका विषयमा विवाद पनि छन्। सन् २०१३ देखि चीन आर्कटिक काउन्सिलमा पर्यवेक्षक सदस्यका रुपमा काम गरिरहेको छ। काउन्सिलले महासागरसँग जोडिएका देश र त्यहाँका बासिन्दाबीच आउने समस्या समाधानका लागि काम गर्छ।
२०१३ यता चीन शंकाको घेरामा छ। भनिन्छ कि चीन यस क्षेत्रको प्राकृतिक ग्यास र तेल भण्डारमाथि कब्जा जमाउने ध्याउन्नमा छ। भलै चीनले यस्ता शंका र आरोपलाई खारेज गर्दै आएको छ। यहाँ १६ देखि २६ प्रतिशत यस्तो भूमि छ जहाँ भरपुर खनिज पदार्थ हुने सम्भावना छ।
आर्कटिक क्षेत्रका मुलुकसँगको वैदेशिक नीतिसम्बन्धी दस्तावेजमा चीनले यसबारे स्पष्ट उल्लेख गरेको छ। ऊ तेल, ग्यास, खनिज पदार्थ, माछा र अन्य प्राकृतिक स्रोतको इच्छा राख्छ तर अन्य मुलुकको साथ र सहयोगका साथ यो काम गर्नेछ।
आर्कटिकमा चासो दिने चीन पहिलो मुलुक भने होइन। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले गत डिसेम्बर महिनामा आर्कटिकमा एउटा प्लान्ट उद्‍घाटन गरेका थिए जसबाट १० भन्दा बढी मुलुकमा ग्यास निर्यात गर्ने उद्देश्य राखिएको छ।
गत वर्ष रुसले आइसवर्ग परियोजना उद्‍घाटन गरेको थियो। रुस यसका माध्यमबाट आर्कटिक महासागरमा हाइड्रोकार्बन फिल्ड विकास गर्न चाहन्छ। पानी र बरफको बीचमा रहने यो फिल्ड पूर्ण रुपमा स्वायत्त रहने छ।
यहाँसम्म कि चिनिया मिडिया तथा रुसी सरकार समर्थक अखबार स्पुतनिकको भनाइ छ कि चीनको पोलर सिल्क रोडको 'आइडिया' मूल रुपमा रुसकै हो र दुबै देश महिनौँ पहिलादेखि यसमा काम गरिरहेका थिए।
पछिल्लो वर्षको मे महिनामा चीनका विदेश मन्त्री वाङ यी रुस गएका थिए। भ्रमणका क्रममा उनले भनेका थिए कि चीन सरकार रुसी सिल्क रोडको समर्थन गर्छ।
ओबीओआरमार्फत् ७० देशलाई सडक तथा समुन्द्रीमार्गबाट जोड्ने चीनको योजना छ। अर्कोतर्फ 'चाइना पाकिस्तान इकोनोमिक कोरिडोर' मा पनि चीनले काम गरिरहेको छ। यसको उद्देश्य चीनको पश्चिम क्षेत्रलाई अरब सागर र हिन्द महासागरमा जोड्नु हो। यसको माध्यमबाट मध्यपूर्व तथा अफ्रिकामा आफनो प्रभाव बढाउने चिनको उद्देश्य छ।
चीनले हाल मालबाहक २० रेलवे लाइन सञ्चालन गरिरहेको छ जसका माध्यमबाट लन्डन, मेड्रिड, रोट्रेडम र ओर्सोभाजस्ता युरोपका सहर सम्पर्कमा छन्।
चीनकको चासो यतिमात्र सीमित छैन। उसले अफ्रिकी मुलुक केन्यामा पनि रेल वे लाइनको काम गरिरहेको छ।
यो समाचार अन्नपृर्णमा प्रकाशित छ ।
चीनको आगामी योजना आफ्नो महत्वपूर्ण सहर कुनमिङलाई दक्षिणका देशहरू भियतनाम, लाओस् र म्यानमारका रेलवे नेटवर्कसँग जोड्नु हो। यदि चीनले यो काम सम्पन्न गरेमा उसले थाइल्यान्ड, कम्बोडिया तथा भियतनामलाई बाँकी दक्षिण पूर्वी एसियासँग जोड्ने परियोजनामा काम थाल्नेछ।
आइतबार १४, माघ २०७४ ०५:०० मा प्रकाशित ।